Posts tagged with ‘Sekoly Alahady’
Hits: 367Faly dia faly tokoa ny ankizy nigorisagorisa tetsy amin’ny Centre de plein air de Lévis. Isaorana ny Tompo noho izao hafaliana omeny anay izao ! Hafaliana foana ny anay ankizy
Hits: 384Ny Sampana Sekoly Alahady dia manasa antsika hiaraka hilalao aminy etsy @ Centre de plein air de Lévis. Ny Sampana no hiantsoka ny fidiran’ny ankizy manao glissade. Ireo ray aman-dreny kosa dia miantoka ny fidirany. Ho an’ireo izay te hanao ski dia afaka manao izany izy : 10 $ no vidim-pidirana (hors location de […]
Hits: 303Comme tous les 5èmes dimanches du mois, et pour le bénéfice de nos enfants, le culte de la FJKM Québec sera en français ! Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.(Mat. 9 : 14)
Hits: 428Misaotra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sortie glissade izay niarahana tamin’ny Sampana Sekoly Alahady ny Sabotsy 2 Febroary 2019 lasa teo. Hafaliana tokoa moa izany fiarahanay izany … Ireo ny sary mitantara izany !
Sampana Sekoly Alahady – sortie glissade
Manasa anao ny Sampana hiaraka hiala voly aminy amin’ny fivoahana “glissade” esty amin’ny parc Myrand
Hits: 514“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6
Hits: 404« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2
Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady
Hankalaza ny alahadin’ny Sekoly Alahady isika ny alahady 9 desambra ho avy zao.
Hits: 416« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2 Misaotra an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fitsimbinany ka nahavitàna ny taom-pianarana 2017-2018 ny Sampana Sekoly Alahady. Misaotra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny ary ny mpampianatra nahatontosa izany. Misaotra ny Fiangonana manontolo koa nanotrona ny Sampana nandritra iny taona iny. Ny fivoahana an-tsaha tamin’ny […]
Hits: 266Soa ny fiarahantsika ! Tanteraka soa aman-tsara ny Asabotsy 17 Febroary teo ny fivoahana “Glissade” niaraka tamin’ny Sekoly Alahady … Tsara be ny andro, teo amin’ny -5 degrés teo “fotsiny” … Faly daholo na ny lehibe na ny kely. Amin’ny herintaona indray ô ! Jereo anie ny hafalianay e !